8-Xiddig Oo Real Madrid & Barcelona Ah Oo Khatar Ugu Jira kulanka El Clasico %
8-Xiddig Oo Real Madrid & Barcelona Ah Oo Khatar Ugu Jira kulanka El Clasico
By Ramzi Yare	 Last updated Feb 13, 2020
kulanka El Clasico ee bisha dambe ee ka tirsan horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan xilli labada kooxoodba isku baacsanayaan ku guulaysiga horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Wargayska Mundo Deportivo ayaa shaaca ka qaaday 8- xiddig oo labada kooxood oo khatar ugu jira in ay seegaan kulanka El Clasico ee bisha dambe ka dhici doona garoonka Santiago Bernabue.
Xiddigaha kala ah France ee Clément Lenglet iyo Ferland Mendy oo u kala ciyaara labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa ugu horeeya xiddigaha khatarta ugu jira in ay seegaan kulanka El Clasico ee 1 bisha March.
Xiddiga Clément Lenglet ayaa seegi doona kulanka Getafe ee todobaadka dambe kadib kaarkii casaa ee loo taagay kulankii Real Betis laakiin waxa uu seegi karaa kulanka El Clasico hadii uu kaarka Digniinta ah qaato kulanka ka horeeya ee ay Barcelona la ciyaari doonto kooxda Eibar.
Sidoo kale Mendy ayaa seegi kara kulanka El Clasico hadii uu kaarka digniinta qaato kulanka kooxda Levante ee ka horeeya kulanka El Clasico.
Wargayska ayaa sheegay in ay jiraan 6 xiddig oo kale oo seegi kara kulanka El Clasico waxana ka mid ah Casemiro, Luka Modric iyo Nacho oo Real Madrid ah iyo Jordi Alba, Samuel Umtiti Iyo Arturo Vidal oo Barcelona ah.
Paul Pogba ayaa rajo weyn ka qabo dib ugu soo laabto garoomada ka hore kulanka weyn ee Manchester derby